Fodiamandrin'ny filohan'ny FLM :: Voalevina tetsy Ambatovinaky ny pasitera Rakotonirina David • AoRaha
Tontosa, omaly antoandro, tetsy amin’ny tokotanin’ny Fiangonana Loterana Malagasy Ambatovinaky ny fandevenana ny nofo mangatsiakan’ny pasitera Rakotonirina David, filohan’ny FLM sady filoha amperinasan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM). Afak’omaly alina, tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany, no nindaosin’ny fahafatesana teny amin’ny toeram-pitsaboana tsy miankina iray ivelan’ny renivohitra izy, rehefa tsy salama ka notsaboina teny an-toerana. Olona vitsivitsy ihany no afaka nanatrika ny fanitrihana ny razana noho ny fepetra ara-pahasalamana mihatra eto Analamanga, amin’izao fotoana izao.
Ireo olona tena akaiky azy sy tompon’andraikitra vitsivitsy, toy ny filoham-piangonana roa lahy mpiara-miasa aminy tao amin’ny FFKM ary solontena avy ao amin’ny foibem-pitantanan’ny FLM, no nanatrika ny fandevenana. Havizanana be loatra no nitarika ny fahafatesan’ity raimandreny ara-pinoana itsy, araka ny fanambaràna nataon’ny avy eo anivon’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny valanaretina (Crco) any amin’ny faritra Menabe, omaly.
« Mbola nitarika ny fivoriana sinodaly taty Morondava ny pasitera David, tamin’ny herinandro lasa teo. Tojo tsy fahasalamana tampoka izy ka notsaboina taty an-toerana. Voatery nanafarana sy nalefa fiaramanidina manokana hihazo ny toeram-pitsaboana tany andrenivohitra, rehefa nihombo ny aretiny. Tao amin’io toerampitsaboana io izy no maty rehefa tsy nahatohitra ny aretiny intsony », hoy ny fanambaràn’ny CRCO Menabe.
Nanaovana fitiliana ny tsimok’aretin’ny Covid-19 ny pasitera Rakotonirina David. Taorian’io no nilazany, tamin’ny antso an-tariby, fa « miiba ny valin’ny fitiliana saingy reraka be izy ». Nifanojo tamin’ny fandrenesana ny fahalasanan’ity tompon’andraikitra ara-pinoana ity anefa ny filazan’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny CCO eny Ivato, omaly, fa « nisy raiamandreny arapinoana iray namoy ny ainy noho ny valanaretina ».
Nisahana andraikitra maro teo amin’ny tontolon’ny finoana ny pasitera Rakotonirina David. Voafidy hitarika ny fiangonana Loterana malagasy eto Madagasikara izy, tamin’ny septambra 2013, raha toa ka ny sinaodam-paritry ny FLM teto Antananarivo no notantaniny, talohan’izay. Tamin’ny 7 janoary 2020 kosa no nitazonany ny toeran’ny filohan’ny FFKM, hatramin’ny fotoana nandaozany ny tany.
«Tampoka ny fahalasanan’ ity namana ara-pinoana ity », hoy ny nambaran’ny monsenera Razanakolona Odon Marie Arsène, arsevekan’Antananarivo, omaly. « Mbola hivory izahay handinika an’izay tokony hatao amin’ny fanoloana ny toerana banga navelany », hoy izy.